Uthi angase ajoyine elinye iqembu uma kuza uKhune | News24
Uthi angase ajoyine elinye iqembu uma kuza uKhune
Johannesburg - Unozinti weMamelodi Sundowns uWayne Sandilands uzocabanga ngekusasa lakhe uma amaBrazilians ethatha u-Itumeleng Khune.
Eminyakeni emibili edlule uSandilands wayengunozinti wesibili weBafana Bafana kodwa lokho kwashintsha ngemuva kokuba indawo yakhe isithathwe uKennedy Mweene eChloorkop.
Izinto kuSandilands zabheda kakhulu kunokuba zilunge ngesikhathi iSundowns ibuyisa uDenis Onyango, owayebolekiswe kwiBidvest Wits.
Funda nalolu daba: IChiefs iqinisekise eyokusayinisa iziqongqwane ezinhlanu
Njengoba uKhune kumanje emataniswa neDowns – imenenja kaSandilands uGlyn Binkin uthi ikhasimende lakhe lingase libheke enye indlela elizoyithatha.
“Sesiyazisile iSundowns ngesikucabangayo,” kusho uBinkin kwiKickOff.com.
“UWayne ungumdlali onohlonze futhi ofuna ukudlala. [Uma uKhune ejoyina] kuzomele senze lokhu esikucabangayo.”
Imenenja yeKaizer Chiefs uBobby Motaung ngoLwesibili uthe uKhune angase agcine esayine inkontileka entsha eNaturena.